All Registered Voters in the City of Portland Should Have Received Their Ballots - Somali | Multnomah County
Khamiis, Julaay 30, 2020
Dhamaan codeeyayaasha duwaanka gashan ee Magaalada Portland waa inay helaan waraaqahooda codaynta maanta, Julaay 30, 2020. Wixii codeeye ah ee Degmada Multnomah ee degan Magaalada Portland ee aan helin warqada codaynta ee Doorashada Tartanka Gaarka ah ee Agoosto 11 waa inay kala hadlaan xafiiska doorashada degmada 503-988-VOTE (8683).
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ku dhiiri gelinaysaa codeeyayaasha inay joogaan guriga, amaan qabaan, oo ay boosta ku codeeyaan. Cusub 2020 — shaambad iminka looma baahno marka warqada codaynta lasoo celinayo. Cod-bixiyeyaasha Magaalada Portland waxay haystaan ilaa Khamiista, 6 da Agoosto inay si amaan ah ugu soo celiyaan codkooda Doorashadii Tartanka Gaarka ah ee Ogoosto 11. Codeeyayaasha boosta kusoo diraya warqada codaynta ee jooga meel ka baxsan gobolku waa inay wakhti hore soo diraan. Wixii ka dambeeya Agoost 6, cod bixiyayaashu waa inay isticmaalaan Goobaha Cod Bixiyeyaasha rasmiga ah ee u furan Doorashadani Tartanka Gaarka ah. Goobaha Rasmiga ah ee Sanduuqyada Codaynta waxaa kamid ah Sanuudqada Lagu Diro 24-Saacadood iyo Sanduuqyada La Balansado 24-Saacadood oo ku yaal laybareeriyada Degmada Multnomah. Fadlan ogsoonaw, maadaama oo Doorashada Tartanka Gaarka ah uu kaliya ka jiro Magaalada Portland, Laybareeriyada Fairview iyo Troutdale ma aqbalayaan waraaqaha codaynta. Laybareeriga Albina waa la raray. Si aad u hesho Goob Codayn oo Kuu Dhaw booqo multco.us/dropsites. Waraaqaha waa in la keenaa Goobta Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah ugu danbayn 8:00 Habeenimo Maalinta Doorashada.
Doorashada Tartanka Gaarka ah ee Agoosto 11, Doorashada Degmada Multnomah waxay furtay goob dheeraad ah oo ku taala Gresham oo loogu talo geley codeeyayaasha reer Portland ee degan ama ka shaqeeya inta u dhaw Gresham. Goobaha Codaynta waxay furan yihiin Julaay 27 - Agoosto 11 waxayna ku yaalaan Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah ee 600 NE 8th Street. Codeeyayaashu waxay heli karaan warqaadaha codaynta ee lumay, waxay heli karaan kaalmo codaynta ah, waydiin karaan su'aalo, ama inta ay qabtaan Goobta Codaynta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham ayay codayn karaan. Waraaqaha codaynta waxaa kaliya la aqbalayaa saacada ay furan yihiin Xaruntamaha Cod Bixintu. Goobta sanduuqa codaynta ee 24-saacadood ah waxa uu ku yaalaa baarkinka Laybareeriga Gresham ee 385 NW Miller Avenue. Adeegyo badan oo codeeyaha ah waxaa lagu buuxin karaa online ahaan. Wixii su'aalo ah, fadlan la hadal 503-988-VOTE (8683).
Doorashada Degmada Multnomah waxay siisaa turjubaad, bilaash ah ee cid kasta oo u baahan codaynta oo ku qoran luuqad aan Ingiriisi ahayn. Macluumaadka codaynta iyo doorashooyinka gaarka ah waxaa laga heli karaa iyaga oo ku qoran sagaal luuqadood online ahaan www.mcelections.org.
Waraaqaha Codaynta Doorashada Tartanka Gaarka ah ee Agoosto 11 waa in la keenaa ugu danbayn 8:00 habeenimo, Agoosto 11, 2020. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan doorashada, fadlan booqo www.mcelections.org.
Furan Julaay 27 - Agoosto 11, 2020
Codeeyayaasha aan weli soo celin warqadooda codaynta waxay keeni karaan iyada oo socda 24-Saacadood Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah ama 24-Saacadood Goobaha Codaynta Rasmiga ah ee Laybareeriga Degmada
Xarunta Cod Bixinta Gresham waxay Furan Tahay Julaay 27 - Agoosto 11 Doroashada Tartanka Gaarka ah ee 11, 2020 ee wixii codeeyayaasha reer Portland ee degan kana shaqeeya Gresham
Multnomah County Elections Assists Voters with Disabilities or Voter Who Need Help in Their Preferred Language - Somali
Doorashooyinka Degmada Multnomah Waxay Caawineysaa Cod-bixiyeyaasha Naafada ah ama Cod-bixiye Ubaahan Caawimaad dhanka Luuqaddooda ay Doorbidayaan